Vavolombelon’i Jehovah any Eoropa
MPONINA 741 311 996
MPITORY 1 611 036
FAMPIANARANA BAIBOLY 847 343
Nitsidika ny efitrano ny iray kilasy
Failandy: Ankizy mpianatra, mitsidika Efitrano Fanjakana
Ankizy mpianatra any Failandy i Ines, ary T4 izy. Henony, indray andro, hoe hiresaka momba ny Vavolombelon’i Jehovah ry zareo, amin’ny lesona momba ny fivavahana. Nasainy hitsidika Efitrano Fanjakana àry ny iray kilasy, ary samy nanaiky handeha na ny mpampianatra na ny mpiara-mianatra aminy.
Nandeha bisikileta nankany amin’ny efitrano ny mpianatra niisa 38, ny herinandro nanaraka. Lalana efatra kilaometatra mahery ilay izy. Tonga koa ny tale sy ny mpampianatra roa. Nandray azy ireo tao ny rahalahy roa sy anabavy telo. Nihinana ody ambavafo ireo mpianatra avy eo, sady nanontanintany momba an’ilay efitrano sy ny Vavolombelona. Hoy izy ireo: “Fa inona kay no ataonareo rehefa mivory?” “Fa fanaovana inona itsy efitra itsy?” Ny fitehirizam-boky io. “Fa maninona no misy hoe ‘enina zaraina folo’ amin’itsy rindrina itsy?” Ny Matio 6:10 no andinin-teny ho an’ny taona tamin’izay.
Nanao ezaka manokana hiarovana ny ankizy amin’ny mpampijaly kely ny sekoly maromaro tamin’izay, ary anisan’izany io sekoly io. Nasehon’ireo rahalahy an’ireo mpianatra àry ilay video ao amin’ny jw.org hoe Ahoana no Hanoherana ny Mpampijaly Nefa Tsy Hamono Azy? Nampiseho zavatra hafa avy tao amin’ny tranonkalantsika koa izy ireo, ary nandefa hiran’ilay Fanjakana iray. Naharitra adiny iray teo ho eo ilay fitsidihana.
Samy tia an’ilay fitsidihana na ilay tale na ny mpampianatra na ny mpianatra. Nahaliana an’ilay tale koa ireo fanazavana ao amin’ny tranonkalantsika, ka tiany hampiasaina amin’ny lesona momba ny fivavahana. Tena faly izy rehefa nilazana hoe afaka mitsidika an’ilay efitrano koa ny kilasy hafa. Ny ampitson’iny ihany dia efa niantso an’ireo Vavolombelona ny mpampianatra iray hafa, satria te hitsidika koa izy sy ny mpianany.
Zava-tsoa tao anaty fanariam-pako
Mipetraka any Romania i Cristina. Tsy nahay taratasy izy, satria tsy mba nandia lakilasy. Nahantra be koa izy, ary nitsindroka fako no fivelomany. Nanaitra ny masony, indray mandeha, ny boky iray nisy sary tsara tarehy sy olona falifaly. Hoy izy anakampo: ‘Tsy maintsy misy olona hoatr’izao any ananonanona any!’ Te hahafantatra ny ao anatin’ilay boky i Cristina, ka niangavy olona mba hamaky an’ilay izy taminy. Nalahelo be izy nahalala hoe resaka momba ny Tenin’Andriamanitra ilay izy nefa narian’ny olona tany amin’ny fanariam-pako. Mbola nitsimpona bokikely sy taratasy mivalona ary gazety tao amin’ilay fanariam-pako ihany izy. Ny sasany efa rovidrovitra fa ny sasany mbola tsy nisy nipika. Nianatra namaky teny izy, satria mbola te hahafantatra an’izay lazain’ireny boky ireny.
Nisy Vavolombelona nitory tamin’i Cristina, tatỳ aoriana, ary nianatra Baiboly izy. Faly be izy satria notaomin’i Jehovah tamin’ny alalan’ireny boky tsy tian’olona ireny. Nivory izy ary tena tiany ny zavatra nianarany. Fa ny tena mahafaly azy dia hoe lasa mahazo boky sy gazety ary bokikely vaovao izy, fa tsy voatery mitsindroka intsony. Nahita zava-tsoa tao anaty fanariam-pako tokoa i Cristina.
Fianarana Baiboly any anaty ala
Alemaina: Margret, mampianatra Baiboly any anaty ala
Mipetraka any Alemaina i Margret. Mitsangantsangana any anaty ala izy sy ny alikany, isa-maraina. Hoy izy: “Miezaka miresaka amin’ny mpandalo aho. Iresahako momba ny Baiboly izy ireo rehefa hitako hoe tsy dia sarotiny.”
Nahita ramatoa efa lehibe izay izy, indray andro. Fitopolo taona mahery ilay olona, ary nitondra ny alikany nandehandeha koa. Tiany ny nifampiresaka tamin’i Margret. Nolazainy fa mivavaka amin’Andriamanitra foana izy ary mamaky Baiboly isan’andro. Nihaona foana ry zareo taorian’izay ary niresaka momba ny Baiboly. Hoy ilay ramatoa, indray andro, tamin’i Margret: “Fa maninona ianao no mahay Baiboly be hoatr’izao?” Dia hoy izy: ‘Izaho ange Vavolombelon’i Jehovah e.’
Efa imbetsaka i Margret no nilaza fa afaka mankany an-tranon’ilay ramatoa izy mba hampianatra Baiboly azy, saingy tsy nety mihitsy izy. Mbola nifampiresaka foana anefa ry zareo. Nasain’i Margret hianatra indray izy, volana maromaro tatỳ aoriana. Tamin’izay ilay ramatoa vao nitsotra tamin’i Margret hoe tsy tia Vavolombelon’i Jehovah ilay rangahy miray trano aminy.
Nitondra Baiboly sy boky Ampianarina i Margret taorian’izay, rehefa nankany amin’ilay ala. Hoy izy raha vao nahita an’ilay ramatoa: “Tsy ny hianatra Baiboly any an-tranonareo intsony izao no hanasako anao, fa ny hianatra Baiboly atỳ anaty ala.” Nanaiky izy sady nanganohano ny ranomasony. Enina andro isan-kerinandro izy ireo no mianatra. Mianatra foana ry zareo na ratsy aza ny andro, fa mampiasa elo sy jiro fanao am-paosy fotsiny.
Hay tsy izay no tiany holazaina!
Nampianatra Baiboly an’i Irina ny anabavy iray atao hoe Delphine, any Boligaria. Tena tian’i Irina ilay fianarana ka nandeha nivory tsy tapaka izy. Tsy tian’ny vadiny hifandray tamin’ny Vavolombelona mihitsy anefa i Irina. Nentin’ilay rangahy nifindra tany amin’ny tanàna kely iray any Soeda àry ny fianakaviany, ka tsy tafaresaka intsony i Irina sy Delphine. Tsy nahay niteny soedoà akory anefa i Irina. Tafahaona tamina mpisava lalana roa atao hoe Alexandra sy Rebecca indray izy tany. Nampiasa an’ilay bokikely hoe Vaovao Tsara ho An’ny Firenena Rehetra izy ireo, ary nasainy novakin’i Irina ilay hafatra amin’ny teny boligara. Mbola nampiasa an’ilay bokikely ihany izy ireo mba hanontaniana an’i Irina raha mila boky amin’ny fiteniny izy. Nihivingivin-doha be mihitsy i Irina, ka hitan’ireo anabavy hoe tsy liana.
Tadidin’i Alexandra hoe ho tonga any amin-dry zareo i Linda, rehefa afaka herinandro vitsivitsy. Soedoà izy io ary manompo any Boligaria. Nieritreritra i Alexandra hoe mety hanaiky ihany i Irina raha itoriana amin’ny fiteniny. Rehefa tonga àry i Linda, dia nitsidika an’i Irina izy mirahavavy. Nolazain’i Irina tamin’i Linda fa efa nivavaka tamin’i Jehovah foana izy isan’alina mba hitohy ny fianarany Baiboly. Entiny eny aminy foana koa ny boky Ampianarina. Amin’izay, hono, rehefa mahita Vavolombelona izy eny an-dalana, dia mba tonga dia mampiseho an’ilay izy. Tsy nahita Vavolombelona mihitsy anefa izy. Faly be mihitsy izy izao fa mahazo boky sy gazety hafa amin’ny teny boligara.
Nanontanian’i Linda i Alexandra hoe maninona no nolazainy fa tsy liana i Irina tamin-dry zareo niresaka voalohany. Nolazain’i Alexandra fa nihivingivin-doha be izy mba hampisehoana hoe tsy liana. Nitsiky i Linda ary nanazava fa mihivingivin-doha ny Boligara rehefa manaiky, fa mihatokatoka kosa rehefa mandà. Mbola azo notohizana indray ny fianaran’i Irina sy Delphine. Nampiasa Internet mantsy izy ireo, ka afaka nifankahita rehefa mianatra. Natao tamin’ny teny boligara aloha ilay izy mandra-pahaizan’i Irina miteny soedoà.
Nanome modely ho azy ny rainy
Mipetraka any Espaina i Jemima. Mbola kely izy dia efa nampianarina ny fahamarinana. Niova be anefa ny fiainany tamin’izy fito taona, satria niala tsy ho Vavolombelon’i Jehovah intsony ny reniny ary nisaraka tamin’ny rainy. Tsy niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah intsony koa i Jemima, rehefa 13 taona, ary tsy nety nampianarin’ny rainy Baiboly intsony.
Niditra tamin’ny fikambanana ara-tsosialy sy ara-politika i Jemima rehefa lehibebe. Nanao fihetsiketsehana izy ireo, mba hitakiana ny rariny ho an’ny vahoaka madinika. Lasa tsy an’asa anefa izy, tatỳ aoriana, ka nasain’i Domingo rainy handoko hiaraka aminy.
Nasain’i Domingo hianatra Baiboly i Jemima, indray andro, tamin’izy ireo niara-nandoko. Tsy nety anefa izy, fa hilazany ihany, hono, ny dadany rehefa mazoto izy. Nihaino raki-peo misy famakiana Baiboly sy gazety i Domingo, rehefa nandoko. Ilay zanany kosa nihaino mozika pop, ary nasiany fitaovana fihainoana an’izany teo amin’ny sofiny.
Nahazo fanasana hanatrika ny Sekoly Ara-baiboly ho An’ny Mpivady Kristianina i Domingo sy ny vadiny tamin’ny Novambra 2012. Efa nanambady indray mantsy izy. Gaga be i Jemima hoe handeha hanatrika sekoly mandritra ny roa volana ny rainy, sady vonona hamoy ny zava-drehetra ka handeha any amin’izay toerana hanendrena azy. Tamin’io vao tsapany hoe tena tia fahamarinana ny dadany. Tiany ho fantatra koa anefa hoe inona no tena ifikirany amin’izy io.
Tsy nihaino mozika pop intsony i Jemima, fa lasa nihaino ny raki-peo fihainoan’ny dadany indray. Lasa be fanontaniana koa izy. Teny ambony tohatra ny dadany, indray andro, sady nandoko no nilaza i Jemima hoe: “Tadidin’i Dada moa izaho ilay niteny hoe hilazako ihany i Dada rehefa vonona hianatra Baiboly aho? Vonona amin’izay mantsy aho izao.”
Faly be mihitsy i Domingo! Nanomboka nianatra Baiboly àry izy ireo ny Janoary 2013, ary natao indroa isan-kerinandro izany. Ny volana Aprily ilay sekoly no nanomboka. Mbola notohizan’izy ireo ihany ilay fianarana fa natao tamin’ny alalan’ny Internet. Afaka nifankahita sy nifampiresaka mantsy izy ireo tamin’izany. Nanatrika ny fizarana diplaoman-drainy i Jemima, ary tena tiany ilay fandaharana. Natao batisa izy tamin’ny 14 Desambra 2013.
Hoy i Jemima: “Nanam-paharetana be tamiko i Jehovah. Hitako hoe tsy nahafoy ahy mihitsy izy. Nomeny tena namana aho. Tsy mba nahita an’izany aho tany ivelan’ny fandaminana. Vao mainka hitako hoe tena tia ahy i Jehovah matoa nitaona ahy ho anisan’ity fianakavian’ny mpirahalahy maneran-tany ity.”
Misy vokany tsara ny fanajana
Mipetraka any Rosia i Vasilii, ary efa ela izy no Betelita. Nitory teo akaikin’ny biraon’ny sampana izy, tamin’ny 30 Martsa 2014, ary nampiasa tabilao fampirantiana. Tonga ny polisy ary nilaza moramora taminy mba hiala teo. Naharay fitarainana avy tamin’ny manodidina, hono, izy ireo. Nisy polisy iray naka feo an’ilay resaka. Niala teo àry i Vasilii, sady efa nanomboka nitangorona ny olona tamin’izay. Nangataka ny hihaona tamin’ny lehiben’ny polisy anefa izy, ny afakampitson’io. Rehefa nihaona tamin’ilay lehibe izy, dia nankasitraka ny zavatra ataon’ny polisy ho an’ny fiaraha-monina. Nisaotra azy koa izy satria nanaja azy tsara ireo polisy rehefa niresaka taminy. Nitodika tany amin’ny polisy namany ilay lehibe sady niteny hoe: “Efa 32 taona aho izay no polisy fa mbola tsy nisy olona nisaotra ahy tamin’ny asantsika mihitsy.” Rehefa nandeha ny resaka dia nohazavain’i Vasilii tamin’ilay lehibe fa tena ara-dalàna ny asa fitoriana ataontsika eo. Dia hoy izy tamin’i Vasilii: ‘Fa maninona ianao no tsy nanohitra ny baikon’ireo polisy, nefa fantatrao hoe manao zavatra ara-dalàna ianao?’ Dia hoy i Vasilii: “Izaho tsinona te hanaja ny polisy. Efa nisy olona nitangorona teo tamin’iny, dia eritrereto hoe ahoana no mety ho fiheveran’ireny olona ireny ny polisy raha nilaza aho fa tsy mahay lalàna ry zareo.” Tena gaga ilay lehiben’ny polisy sy ilay namany. Nomeny toky i Vasilii hoe tsy hisy hanakantsakana intsony izy amin’ny manaraka rehefa mitory.